သက်ဝေ: ကံ ကံ၏ အကျိုး
Anonymous July 13, 2009 at 11:49 PM
Hmoo July 13, 2009 at 11:52 PM
And take all of my good luck for you..:)
myo July 14, 2009 at 12:04 AM
မီယာ July 14, 2009 at 12:33 AM
မကောင်းတာ လုပ်ရင် နောက်ဘ၀မဟုတ် အခုဘ၀မှာပဲ တန်ပြန် အကျိုးခံစားရတယ် ဆိုတာ တကယ်ယုံပါတယ် အမရေ အဲ့ဒါတွေကြောက်လို့ အမြဲ သတိထား ဆင်ခြင်ပါတယ်။ ဖတ်ရတာ အကျိုးရှိလိုက်တာ အမရေ
tg.nwai July 14, 2009 at 1:52 AM
အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ် သက်ဝေရေ..ဒါကြောင့် မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင် ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဖို့ မြတ်စွာဘုရားက မှာကြားတော်မူခဲ့တာပေါ့..။ ပုထုဇဉ်ဆိုတာကတော့ စိတ်စေတသိက်လေးတွေ အရောင်ဆိုးတဲ့အတိုင်း အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာပေမယ့် အတတ်နိုင်ဆုံးဖြူအောင် မကြာခဏလျှော်ဖွတ်နေရင် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ ကံနဲ့ ကံရဲ့အကျိုးကို အဆိုးအကောင်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင်တာပေါ့နော်..။
khin oo may July 14, 2009 at 2:44 AM
မေဇင် July 14, 2009 at 9:21 AM
အရာရာတိုင်းသည် မိမိ၏ စိတ်နေစိတ်ထား..အားလုံးနှင့်သာ သတ်ဆိုင်ပါသည်..မမသက်ဝေ .... ဒီလို ပိုစ့်လေးတွေ ကြိုက်တယ်..။ များများရေးပါနော် အားပေးနေပါတယ်..။
Thandar July 14, 2009 at 5:53 PM
fortune = own workdone (past & present)
after my son pass away, i start consider abt me & hb's fortune.
maybwe killed together to other's kid?
can consider abt fortune more.
sin dan lar July 14, 2009 at 6:53 PM
ဖတ်သွားပါတယ် မသက်ဝေ.. အပေါ်က Thandar ရဲ့ ကောမန့်လေးဖတ်ပြီးလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်...။
Anonymous July 14, 2009 at 10:09 PM
..""" လူတဖက်သား၏ အဆင်မပြေသော၊ မကောင်းသော အခြေအနေများကို တွေ့ရသောအခါတွင် စာနာ ထောက်ထားသော၊ ကြင်နာ ငဲ့ညှာသော ဂရုဏာ စိတ်မျိုးမထားနိုင်ပဲ လှေနစ်သူ ဝါးကူထိုး၊ အလိုလိုနေရင်း အားရ ဝမ်းသာ ဖြစ်ကြကုန်လေ၏။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် သူတို့သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိမထားမိလိုက်ခင်မှာပင် မနှစ်လိုဖွယ်ရာ မျက်နှာအမူအရာများဖြင့် မကောင်းသော စကားတင်းများကို တိုးတိုးတမျိုး ကျယ်ကျယ်တဖုံ ဆိုတတ်ကြလေသည်။ ကိုယ့် အတွင်းစိတ်ကို မဖုံးဖိနိုင်ပဲ မကောင်းသော စိတ်စေတနာတို့ဖြင့် မကောင်းသော လုပ်ရပ်များကို ဆက်ကာ ဆက်ကာ ပြုမူတတ်ကြလေသည်။.."""................................
“ဒီလောက်တောင် အယူသည်းနေမှတော့ စင်ကာပူမှာလဲ မနေသင့်တော့ပြီ၊ ..........ကိုယ်တိုင်က စိတ်တွေ တော်တော် အချဉ်ပေါက်နေသော်လည်း ......????
မကောင်းတာ လုပ်ရင် နောက်ဘ၀မဟုတ် အခုဘ၀မှာပဲ တန်ပြန် အကျိုးခံစားရတယ် .......
S-C July 14, 2009 at 11:56 PM
“မိမိ၏ စိတ်နေ စိတ်ထားတို့တွင် ချို့ယွင်းချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက နောင်တချိန်တွင် ထိုအမှားမျိုး ထပ်မမှားအောင်၊ ထို မကောင်းသော စိတ်ထားမျိုး ထပ်မထားဖြစ်အောင် ကြိုတင် တားဆီးခြင်း၊ ဆင်ခြင် သတိထားခြင်းတို့ ဖြင့် အစစ အရာရာတွင် ကံကောင်းခြင်းဖက်သို့ ဦးတည်လာစေနိုင်ပါသည်။” ….
လူအများစု “ကံကောင်း၏, မကောင်း၏” လို့ပြောနေကြတာက ကံထက်, ကံရဲ့ အကျိုးကို ပြောနေကြတာပါ။ တကယ်တော့ ကံ၏အကျိုး ဆိုတာကတော့ ကမ္မနိယာမ အတိုင်းသွားရမှာမို့ ဘာမှတော့ သိပ်မတတ်နိုင်တော့။ ဒါပေမယ့် ကံ(အကြောင်း) ကောင်းအောင် စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်း မွေးမြူနေတာကိုတော့ ကိုယ်တတ်နိုင်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေး ကောင်းခြင်းတွေဆီကို ဦးတည်လာနိုင်ပါတယ်။ အခု ရေတွင်းတူး အခု ရေကြည်သောက်ရမယ်လို့ ဘယ်သူမှ တရားသေမပြောနိုင်ပေမယ့်၊ စိတ်နှလုံးကောင်း ဖြစ်နေရတာလေးနဲ့တင် ကျေနပ် နိုင်ကောင်းပါတယ်။
သီဟသစ် July 15, 2009 at 12:41 AM
တန်ခူး July 15, 2009 at 12:49 PM
သက်ဝေရေ… ဒါလေးဖတ်ပြီး ဂျူးရဲ့ သူမင်းကိုဘယ်တော့မှ ထဲက မြန်မာလူမျိုးတွေ ခဏခဏသုံးစွဲနေကြတဲ့ စကား(ကံ) ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးတာလေး သွားသတိရတယ်… ကောင်းတာလုပ်တဲ့အခါ၊ ကောင်းတဲ့စိတ်လေးထားတဲ့အခါ အနည်းဆုံး ကိုယ့်စ်ိတ်တွေ ကြည်လင်ရတာမို့အဲဒါ လက်ရှိအကျိုးပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးဥပမာပဲနော်… ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတဲ့ ပို့ စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ…
puluque July 16, 2009 at 8:36 PM
အရာရာတိုင်းသည် မိမိ၏ စိတ်နေစိတ်ထား နှင့် မိမိမှ ပြုသော အကောင်း အဆိုး အကြောင်းအရာများတို့နှင့်သာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် သက်ဆိုင်မှုရှိပါသည်။
မှန်ပါတယ် မမရေ..ပုလုကွေးကတော့ ကံ ကံ၏ အကျိုးကို လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။
Rita July 16, 2009 at 10:27 PM
ကောင်းမွန်တဲ့ post ပါ မမရယ်။ နောက်ကျမှ ဖတ်မိတယ်။ နောက်လဲ ဒါမျိုးလေးတွေ ဖတ်ချင်ပါတယ်။